Darwin • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Ny maha akaiky an'i Darwin an'i Azia atsimo atsinanana dia mampifandray azy eo amin'i Australia sy ny firenena toa an'i Indonezia sy Timor Atsinanana. Ny làlambe Stuart dia manomboka any Darwin, manitatra mianatsimo ny afovoan'i Aostralia amin'ny alàlan'ny Tennant Creek sy Alice Springs, ary any Port Augusta, South Australia no misy azy. Ny tanàna dia miorina eo amin'ny tampon'ny havoana ambany izay manatrika ny seranana. Ny faritra manodidina azy dia manomboka any Lee Point any avaratra ary mihatra hatrany Berrimah atsinanana. Nandalo Berrimah, ny làlambe Stuart dia mandroso hatrany amin'ny tanànan'ny zanabolana an'i Darwin Palmerston sy ny manodidina azy.